အတော်များများသိကြနှင့်ကကိုချစ် - raclette
Raclette, ပူပန်းကန်သို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ဦးလူကြိုက်များပါတီ hit ကိုကြားသက်ဆိုင်ရာအိုးနှင့်အတူပူပြင်းတဲ့ကြောကျခဲပေါ်တွင်အစားအစာ။ သို့သော်မသာပါတီ raclette များအတွက်နှစ်သစ်ကူးသို့မဟုတ်မွေးနေ့မှမိတ်ဆွေများနှင့်နေဆဲများစွာသောအခြားအခါသမယလူကြိုက်များစားပွဲအလယ်၌ပူပန်းကန်နှင့်အတူစားနပ်ရိက္ခာနှင့်အတူညနေပိုင်းတွင်များအတွက်ပျူငှါနွေးထွေးသောမိသားစုအိမ်မှာညနပေိုငျးအတွက်လည်းသင့်လျော်သည်။
Raclette - ထိုပျူငှါနွေးထွေးသောနှင့်အထူးအစားအစာ
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့အစားအသောက်ပြင်ဆင်မှုဤအမျိုးအစားဒီတော့ပေါ်ပြူလာစေသည်? နေ့လည်စာအဖြစ်ညစာ Raclette လုပ်နိုင်တဲ့ကိုစားနေကြသည်။ ဒါဟာဥယျာဉ်တော်၌, ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် Raclette စားသုံးနိုင်ပါသည်လသာဆောင်ပေါ်အိမ်တွင်းဒါပေမယ့်လည်းနွေရာသီအတွက်အအေးရာသီအတွက်အလွန်ကောင်းစွာသင့်လျော်သည်။ ဒီမှာအလှတရားလူမှုရေးနှင့်သတိအလွန်တစ်ဦးချင်းအတွေ့အကြုံသည်။
အမှန်တကယ်စုစည်းမယ့်အစားကိုသာစားပွဲ၌က "စား" မှတဆင့်ရာအရပ်ကိုကြာသောကွောငျ့ Racletten များအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို Raclette Esser သူ့ကိုယ်ပိုင်အစားအသောက်ထဲကနေရွေးချယ်တော်မူလျှင်, ကင်ပေါ်မှာတင်သို့မဟုတ်ဒယ်အိုးထည့်သွင်းဖို့လိုသည်။
သက်သတ်လွတ်, သက်သတ်လွတ်, အသား, ငါးသို့မဟုတ်ဝက်အူချောင်းစားခြင်းရှိမရှိ, ဒီမှာလူတိုင်းကသူ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာရရှိသွားတဲ့။ ဒါ့အပြင်အရာအားလုံးပြင်ဆင်နေအတွက်ကဒီမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင် "Pfännchenbeleger" သူမ၏တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်ကြိုတင်အိုးထဲမှာဆန္ဒရှိအစားအစာဖြတ်ဖြစ်စေဒီနေရာမှာကိုယ်နှိုက်က၎င်း၏တပ်မက်လိုချင်သောအစာအာဟာရကိုဖြတ်။
ဒယ်အိုးထဲမှာတော်တော်လေးအများကြီးအားလုံးအရသာ, ဟုတ်မဟုတ်ပြောင်းဖူး, ဘေကွန်, ကြက်သွန်နီ, မှို, ပုစွန်, ကညွတ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုက်ညီ, အသားသို့မဟုတ်ဝက်အူချောင်း၏သေးငယ်တဲ့အပိုငျးပိုငျး, ကြက်သွန်ဖြူ - စာရင်းအသတ်မရှိဆက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဒယ်အိုးထဲမှာပါဝင်ပစ္စည်းများတစ် raclette ဒိန်ခဲနှင့်အတူဖုတ်ရှိသော်လည်းအပူနှင့်မဖုတ်ဖြစ်နိုင်ကြပါတယ်။
ပြင်ဆင်မှုဤအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်. အကြီးအရာလူမှုရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှကိုယ့်စားပွဲမှာတိတ်တဆိတ်ထိုင်စား။ စားပွဲ၌တိုက်ရိုက်ပြင်ဆင်မှုအားဖြင့်အထူးသဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်သို့မဟုတ်ထိုနည်းတူလူကြိုက်များမိသားစုအတွင်း, အ raclette အောင်ပြောဆိုရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်အချိန်အများကြီးလည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ပြင်ဆင်မှုအတွက်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများမတည်ရှိပါဘူးသျောလညျးသငျစဉျးစားသငျ့အရာအခြို့ raclette လည်းရှိပါတယ်။ Raclette စားပွဲ၌ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ပါသည်, ထို - ထိုပါဝင်ပစ္စည်းများကျော်ကြိမ်ချက်ပြုတ်သို့မဟုတ်ဖုတ်ကြရှည်လျားလွန်းမယူသင့်ပါတယ်။
ထို့အပြင်အစားအသောက်အလွန်အကျွံရေကိုမပေးသငျ့တယျသို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်ဘို့အဆီလိုအပ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကသာ raclette မှနွေးထို့နောက်ချက်ပြုတ်သို့မဟုတ်ကြော်နှင့်မှကြိုတင်မဲအတွက်အစားအစာအကြံပြုသည်။
စားပွဲပတ်ပတ်လည်အားလုံးလူပေါင်းကောင်းသောထိုင်က sizzles နေချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပုပန်းကန်သို့မဟုတ်ဒယ်အိုးထိပ်ပေါ်မှာအစားအစာအတူတကွထားတော်မူ၏။ ဒါဟာအစားအသောက်ဟောင်းများကိုမဆိုပျော်စရာရန်ငယ်ရွယ်ထဲကနေစေသည်။ အမျိုးမျိုးသောဝက်အူချောင်း, အသုပ်, dips သို့မဟုတ်အခြားမုန်နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
အဆိုပါ raclette မသာအရသာအနံ့ကြောင့်လည်းနွေးထွေးမှုပြန့်နှံ့။ အများကြီးမသိရပါဘူးသို့မဟုတ်သေးစိတ်ကူးအတူတက်မလာကြပါပြီအဘယျသို့ - ချက်ပြုတ်၏ဤပုံစံအစားအစာများနှင့်အချိုမြိန်အချိုပွဲ၏ပြင်ဆင်မှုအဘို့ကိုသာအသင့်လျော်မဟုတ်ပါဘူး diesm အိမ်ထောင်စုပစ္စည်းနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပျားရည်နှင့်မုန့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူမြက်ခင်းသင်္ဘောသဖန်းသီးကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ် Nutella တစ်ငှက်ပျောသီးအထက်အပူအဘို့ဤပါဝင်သည်။ ဤနည်းအစာစားသည့်အခါအဆိုပါစိတ်ကူးစိတ်သန်းမျှဘောငျသိတယ်။
အဘယ်သူသည်သာမန် raclette ဒိန်ခဲ Gauda, ​​Edam သို့မဟုတ် mozzarella နဲ့သူ့ရဲ့အိုးဖုတ်နိုင်ပါတယ်ကြိုက်တယ်, ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာစိတ်ကူးစိတ်သန်းမျှဘောငျသိတယ်င်မထားဘူး။
raclette ဖွန်ဒူးအိုး၏အလယ်၌ထည့်သွင်းထားသည်။ အဆိုပါမူကွဲများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတဖန်ဤနေရာတွင်ပိုကြီးဖြစ်ကြသည်။ raclette ၏တီထွင်မှုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနည်းနည်းရက်စွဲပါသို့သော်၎င်း၏လူကြိုက်များမလြော့ဆက်လက်မဟုတ်, ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်။
Tequila - အချိုရည် | သောက်စရာ
နွေရာသီအဘို့အကော့တေးချက်ပြုတ်နည်းများ | သောက်စရာ